Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Madaxda reer Awdal ee gudaha Vs Madaxda reer Awdal ee Qurba-jooga
Madaxda reer Awdal ee gudaha Vs Madaxda reer Awdal ee Qurba-jooga
Nov 12, 2012 SOMALI NEWS Comments Off on Madaxda reer Awdal ee gudaha Vs Madaxda reer Awdal ee Qurba-jooga
Madaxda Reer Awdal ee Guduhu waxay qabaan in waxa ka maqan reer awdal wada hadal lagu soo dhameeyo Hargaysana aan laga tagin laakin arinkaasi waxa ka biyo diiday siyaasiyinta qurbe jooga oo ku macneeyahay inayna faa’iido soo wadin wada hadal aan suurto gal ahayn oo wakhtiga uun lagu lumiyo balse waxa hadana ninkii qurbe jooga hogaamin jiray rabaa in awdalstate waxa kaga maqan somalia wada hadal lagu soo dhameeyo oo Muqdishona aan laga tagin.
Akhristow bal su’aalahan ka soo jawaab:-
1-Yaa Saxsan Yaase waalan marka?
2-Wada Hadal Wada Hadalse Muxu Dheeryahay?
3- Maxay ku kala duwanyihiin hadii kuwii gudaha awdal joogay leyihiin wada hadal ayaanu wax ku dhamaysanayna oo SNM ayaanu la Hadlayna Kuwii Qurbe Jooguna ay ku yidhaahdaan somalia ayaanu waxa naga maqan wada hadal kaga soo dhameynayna ? Marka Akhristow miyayna ku cadayn ladaba nidaamba inayna dadka reer awdalstate waxba u hayn sidoo kalena miyayna cadayn labada kooxood ee midna somalia la hadlayo midna somaliland inayna labaduba waxba u so wadin dadka reer awdalstate?
4- Sideese ficil qof sameeyay ood hore u tidhi waa khalad hadana adigu marka aad sameyso aad u odhan karta waa sax?
5-Dadka Reer Awdalna waxa labada dhinacba loogaga yeedhaya hadii uu yahay Wada hadal uun Maxaa Dadka Loo Dhibayaa?
6- Maxase reer awdal markaste ku xidhay uun meel kale miyayna awdal gaar isku maamuli karin markeeda horeba intaan la gaadhin meeshay raacayso?.
Su’aalahan iyo Kuwo kale oo badan ayay qabaan dadka reer awdalstate bal jawaabahoodana waxanu ka sugayna dadka.
Waxanad ka Dheehan karta Cartuunkan
Dr. Gaboose oo fashiliyay qorshe uu Siilaanyo ku doonayo inuu afka ku jabiyo cid kasta oo hab-dhaqankiisa asaasaqa ah ka hor timaada Reer Awdal oo dantoodii ku tumanaya midkalana u tafo-xaydan!!!